खाने बित्तिकै सुत्ने बानीले यस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छ ! « Salleri Khabar
खाने बित्तिकै सुत्ने बानीले यस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छ !
अहिलेको व्यस्त जीवनशैली र दिनभरिको भागदौडले गर्दा थकान तथा तनाव सिर्जना हुने हुनाले मानिसहरू हरेक राति खाना खान साथ सुत्ने गर्दछन् । कामको थकान तथा खानामा धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको कारणले अधिकांश मानिसहरू खाना खानासाथ सुस्त महसूस गने हुदा सुत्ने गर्छन् ।
धेरैजसो टन्न खाना खाएपछि आँखा भारी हुन्छ र निन्द्रा लाग्छ । तर, खाना खानेबितिक्कै सुत्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । खान खानेबितिक्कै पल्टिदा वा सुत्ने गर्दा शरीरमा विभिन्न किसिमको रोगहरू देखा पर्न सक्छ । रातिको खाना खाएपछि सुत्दा अल्छिपन, शरीरमा विभिन्न रोग लाग्नुका साथै तौलमा वृद्धि हुने गर्छ ।
चिकित्सकहरूले समेत बेलुकाको खाना खानेबित्तिकै नसुत्न सल्लाह दिने गर्छन् । खाना खाएलगत्तै सुत्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गर्ने गर्छ ।
खाने बित्तिकै ढल्किने, पल्टिने वा सुत्दा पेटमा बोसो थुप्रेर पेट लाग्ने समस्या बढ्न जान्छ । मोटोपनाले मात्र पनि मानव शरीरमा विभिन्न रोगहरू निम्त्याईरहेको हुन्छ । खाना खाने बित्तिकै निन्द्रा लाग्ने बानिबाट छुटकारा पाउनका लागि खानाको मात्रा तथा पोषण तत्वको बारेमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ ।
एकैसाथ अत्यधिक मात्रामा नखाने, खाएपछि सकेसम्म बस्ने प्रयास गर्ने र बाहिर बरन्डा वा घर वरिपरि हिँड्ने बानी बसाल्नु पर्छ । ।
जान्नुहोस् पारिजातको ५ चमत्कारी औषधीय गुणहरू
कोरोना कहर – घरमा पाहुनाहरू आउँदैछन् भने यी चीजको ख्याल गर्नुहोस् !
कोरोना कहर - घरमा पाहुनाहरू आउँदैछन् भने यी चीजको ख्याल गर्नुहोस् !
जान्नुहोस् एलोभेराको उत्तम गुणहरु